आनन्द : बुद्धका छाया- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
आनन्द : बुद्धका छाया
बुद्धका अन्य मुख्य शिष्यको जस्तै आनन्दको सुरुआती दिनबारे धेरै जानकारी उपलब्ध छैन । एउटा तथ्य के भने बुद्धजस्तै उनको जन्म त्यही लुम्बिनीमा भएको थियो ।
जेष्ठ ४, २०७६ हिमेश
बृद्ध जति बेला ५५ वर्षका भए, उनले आफू वृद्ध भएको अनुभव गरे र भने, ‘मेरो कोही स्थायी निजी सेवक भए हुन्थ्यो  । ’ बुद्धत्व प्राप्तिको २५ वर्षसम्म उनका निजी सेवक समयसमयमा परिवर्तन भइरहे  ।
बुद्ध एकथरी भन्थे, ती निजी सेवक अर्कोथरी बुझ्थे । एकपल्ट बुद्धका सेवक रहेका नागसमालले उनलाई नै अनादर गरे र पात्र भुइँमै राखिदिए । यस्तोमा बुद्धलाई महसुस भयो, अब भने स्थायी निजी सेवक चाहिन्छ ।
बुद्धका सबै प्रधान शिष्यले बुद्धको सेवा गर्ने इच्छा देखाए । स्वयं बुद्धले मानेनन् । केवल आनन्दले केही बोलेका थिएनन् । उनी चुपचाप थिए । बुद्धले सोधे, ‘तिमी किन बोल्दैनौ ?’ आनन्दको उत्तर थियो, ‘मागेर केही पाइन्छ भने त्यसको के नै अर्थ छ र ?’ आखिरमा बुद्धले नै आनन्दलाई आफ्नो निजी सेवक राख्ने भए, तर त्यति बेला पनि आनन्दले आठ सर्त राखेका थिए । त्यसमध्ये एउटा थियो, आफू नभएको बेला बुद्धले केही उपदेश दिएको भए फेरि दोहोर्‍याएर त्यसलाई सुनाउनुपर्छ । बुद्धले आनन्दका सबै सर्त स्विकारे ।
त्यसपछिका २५ वर्ष आनन्दले बुद्धको लगातार सेवा गरिरहे । बुद्धसँग उनी छायासरह रहे । बुद्ध जहाँ जान्थे, उनी त्यसको पछाडि पछाडि जान्थे । जुन दिन सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो, त्यही दिन आनन्दको पनि जन्म भएको थियो । उनी बुद्धको निजी सेवक हुँदा आफैं पनि ५५ वर्षका थिए । आनन्दका बुबा अमितोदन शुद्धोदनका भाइ थिए । बुद्धत्व प्राप्तिको दोस्रो वर्षमा आनन्दको प्रवज्या भएको थियो । बौद्ध धर्मको इतिहासमा स्वयं बुद्धपछि आनन्द दोस्रो ठूलो नाम हुन् ।
आनन्द हुँदैन थिए त बौद्ध धर्मको इतिहास अहिलेको जस्तो हुने थिएन । आनन्दले खास खास काम नगरेको भए, बौद्ध धर्म स्वयं अहिलेको जत्तिको चिरस्थायी हुने थिएन । बुद्धलाई जीवित छँदै लागेको थियो, आफू नरहेपछि कतै यो धर्म लोप हुने त होइन ? आनन्दले धेरै यस्ता काम गरे, जसले गर्दा बौद्ध धर्म लोप नभएर अझ चारैतर्फ फैलिएर गयो । आनन्दसँग जोडिएका यस्तो धेरै घटना छन्, जुन बौद्ध धर्मको इतिहासमा निर्णायक सावित भएका छन् ।
बुद्धका अन्य मुख्य शिष्यको जस्तै आनन्दको सुरुआती दिनबारे धेरै जानकारी उपलब्ध छैन । एउटा तथ्य के भने बुद्धजस्तै उनको जन्म त्यही लुम्बिनीमा भएको थियो, जुन अहिलेको आधुनिक नेपालमा पर्छ । आनन्दले लामो जीवन पाएका थिए, १ सय २० वर्ष । बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि उनले बाँकी जीवन धर्मको प्रचार–प्रसारमै बिताए । पछि उनका शिष्यले यो कामलाई अगाडि बढाए । आज बुद्ध जयन्तीको दिन आनन्दको पनि जन्म दिन । बुद्धबारे मात्र होइन नेपालले आनन्दबारे पनि
गर्व गर्नुपर्छ ।
बहुश्रुत र स्मृतिवान
बुद्धलाई आनन्द खुबै प्रिय लाग्थ्यो । उनी प्रायः आनन्दको प्रशंसा नै गर्थे । आनन्द खुबै बहुश्रुत थिए अर्थात् विद्वान् थिए । उनको सबैभन्दा ठूलो गुण नै स्मृतिवान थियो । उनी बुद्धले जे भन्थे, त्यसलाई ठ्याक्कै त्यसरी नै सम्झन सक्थे । बुद्धको प्रवचनलाई उसैगरी सम्झन सक्ने सामर्थ्य भएको हुनाले नै आनन्दलाई धम्मभाण्डागारिक पदवी दिइएको थियो । बुद्धले भनेका हरेक कुरा उनलाई याद हुन्थ्यो । बुद्धले जति उपदेश थिए, ती सबै प्रत्यक्ष सबैभन्दा बढी सुन्ने आनन्द नै थिए । बुद्धलाई आवश्यक पर्ने खालका समाचार उनलाई सुनाउने काम आनन्दकै थियो । बुद्धलाई केही समस्या पर्‍यो भने पनि सल्लाह दिने काम आनन्दकै हुन्थ्यो । बुद्धले दिएको उपदेशलाई विस्तारपूर्वक सम्झाउने र बुझाउने काम आनन्दकै थियो । केही अवसरमा बुद्ध छोटकरीमा उपदेश दिन्थे र आराम गर्थे । त्यस्तो स्थितिमा आनन्दकै काम हुन्थ्यो, ती उपदेशलाई सजिलो तरिकाले बुझाउने । त्यसैले बुद्धले जानाजान छोटकरीमा उपदेश दिन्थे ।
बुद्ध यस्तो स्थिति तयार पार्थे, जसबाट अरू आनन्दकै मुखबाट थप उपदेश सुन्न बाध्य होउन् । कहिलेकाहीं आनन्द एक्लैले बुद्धबाट उपदेश सुन्थे र पछि त्यो अरूलाई सुनाउँथे । आनन्द बुद्धसँग जुनसुकै विषयमा पनि प्रश्न गर्न सक्थे । बुद्धसामु निजी सवेक हुँदा उनले राखेका सर्तमध्ये यो पनि एक थियो, प्रश्न सोध्ने अधिकार, जुनसुकै विषयमा । आनन्द बुद्धका हरेक क्रियाकलापमा ध्यान दिन्थे । लगातार बुद्धकै सामीप्यमा रहने हुनाले पनि यो सम्भव भएको थियो । यदि बुद्ध अनायास मुसुक्क हाँसेमा पनि आनन्दलाई त्यसको कारण भन्नुपर्थ्यो । आनन्दलाई के राम्रोसँग थाहा थियो भने बुद्धको हरेक क्रियाकलापमा केही न केही अर्थ छ । आनन्द प्रायः धर्मको विषयलाई लिएर बुद्धसँग दोहोरो चर्चा गरिरहन्थे । फेरि आनन्दको संगत पनि बढी आम मानिससँगै थियो । उनी बुद्धका साधारण अनुयायीमाझ खुबै प्रिय थिए । आनन्दका यी सबै स्वभाव र बानी नै अन्ततः बौद्ध धर्मलाई चिरस्थायी बनाउन निर्णायक रह्यो ।
भिक्षुणी संघको स्थापना
भिक्षुणी संघको स्थापनामा आनन्दको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ । आनन्दले नै बुद्धलाई प्रेरित गरेका थिए, महिलालाई प्रवजित गर्न । अझ भनौं, बुद्धलाई बाध्य पारेका थिए । कपिलवस्तुमा जति बेला महाप्रजापति गौतमीले महिलाले पनि प्रवजित हुने अनुमति मागिन्, बुद्धले यसलाई अस्वीकार गरे । गौतमी बुद्धकी कान्छी आमा हुन् । उनले नै सिद्धार्थ गौतमलाई सानोमा हुर्काएकी हुन् । सयौं शाक्य महिलाको साथ लिएर गौतमी बुद्धको पछाडि पछाडि लागेर वैशालीसम्म पुगिन् । आनन्दले उनीहरूको सबै कुरा सुने र बुद्धसामु गएर महिलाको अनुरोध स्विकार्न याचना गरे । आनन्दले तीनपल्ट अनुरोध गरे, बुद्धले तीनैपल्ट अस्वीकार गरे । यस्तोमा आनन्दले दोस्रो बाटो रोजे र बुद्धलाई यसका लागि भावनात्मक रूपमा आफ्नो पक्षमा ल्याउन खोजे । आनन्दले बुद्धलाई धेरै प्रश्न गरे र त्यसमध्ये एउटा प्रश्न थियो, ‘के महिला अर्हत्व प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन् त ?’ बुद्धको उत्तर थियो, ‘सक्छन् ।’ आनन्दले त्यसमै टिकेर बुद्धलाई भिक्षुणी संघ स्थापना गर्न बाध्यजस्तै पारे ।
आनन्दले भनेका थिए, ‘महाप्रजापति गौतमीले बुद्धको धेरै उपकार गरेकी छन् । आफ्नै जन्म दिने आमाको निधनपछि सिद्धार्थ गौतमलाई दूध खुवाउने गौतमी हुन् । महिलाले पनि प्रवज्या पाउनुपर्छ र यस्तो भए धेरै राम्रो हुनेछ ।’ आठ सर्तमा बुद्ध महिलालाई पनि प्रवज्या दिन तयार भए । प्रजापति भिक्षुणी बन्ने पहिलो महिला भइन् । त्यसैले महिलाबीच आनन्द खुबै लोकप्रिय थिए । आनन्दलाई कसैले केही नराम्रो भनेमा भिक्षुणी तुरुन्तै उनको पक्षमा हुन्थे ।
पहिलो संगायनामा भूमिका
बुद्धको महापरिनिर्वाणको तीन महिनापछि पहिलो संगायना भएको थियो । बुद्धपछिका उनका मुख्य मुख्य शिष्यले बौद्ध धर्मलाई चिरस्थायित्व दिन यो सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए, जसमा पाँच सय भिक्षु सहभागि थियो । त्यसमध्ये ४ सय ९९ भिक्षुलाई सम्मेलनअगाडि नै अर्हत्व प्राप्त थियो । अविश्वसनीय रूपमा आनन्दलाई भने अर्हत्व प्राप्त थिएन । सम्मेलनकै क्रममा उनले यसलाई आत्मसात् गरे । पहिलो संगायनाकै कारण अहिलेको त्रिपिटकले सुरुआती रूप लिएको हो ।
आनन्द बुद्धको निकै नजिक थिए, त्यसैले यही कारणमा आनन्दसँग धेरैको ईर्ष्या पनि थियो । एक प्रकारले भन्ने हो भने संघले आनन्दलाई न्याय गर्न सकेन । बुद्ध हुँदा आनन्दलाई लिएर प्रश्न गर्ने आँट कसैमा थिएन । धेरै भिक्षुको आपत्ति त केमा थियो भने आनन्दले भिक्षुणी संघ स्थापनाका लागि निर्णायक भूमिका खेले । तर सबैलाई के पनि थाहा थियो भने आनन्दबिना पहिलो संगायना सम्भव हुन्न । एकप्रकारले संघ बाध्य थियो, आनन्दको भूमिकालाई लिएर ।
त्यसै संगायनाका क्रममा आनन्दमाथि संघले विभिन्न आरोप लगाए । जस्तो, आनन्दले बुद्धसँग सानातिना नियम के हो भनेर सोधेनन् । बुद्ध महापरिनिर्वाण हुँदै छन् भनेर थाहा पाएर पनि आनन्दले थप केही वर्ष जीवित रहन अनुरोध गरेनन् । अनि उही पुरानो कुरा, आनन्दले किन भिक्षुणी संघ स्थापाना गर्न भूमिका खेले त ? आनन्दलाई राम्रोसँग थाहा थियो, उनले केही भूल गरेकै थिएनन् । तर उनलाई उत्तर दिन बाध्य पारियो ।
आनन्दले पनि संघको मन राख्न सबै अपराध स्वीकार गरे र आफ्नो उदारता देखाए । राजा अजातशत्रुको संरक्षणमा राजगृहमा भएको पहिलो संगायनाका क्रममा आनन्दले धर्मसम्बन्धी उत्तर दिएका थिए । त्यो संगायना बुद्धका अर्का प्रमुख शिष्य महाकाश्यपको अध्यक्षतामा भएको थियो । उनले धर्मसम्बन्धी प्रश्न गर्थे र त्यसको उत्तर आनन्दले दिएका थिए । त्यसको अर्थ के भने सम्पूर्ण बुद्ध वचन आनन्दले आफ््नै मुखले त्यस संगायनामा सुनाएका थिए ।
त्यसैले पालि बौद्ध साहित्यका हरेक सूत्रमा सुरुमै भनिएको हुन्छ, ‘एवं मे सुतं ।’ अर्थात् ‘यस्तो मैले सुनेको छु ।’ बौद्ध धर्मका अधिकांश साहित्य यही वाक्यबाट सुरु हुन्छ र यो आनन्दकै शब्द हो । त्यसको के पनि अर्थ हो भने हामी धर्मबारे जति पनि सुनेका छौं, त्यो आनन्दको मुखबाट सुनेका हौं । आनन्दले बुद्धसँग लामो संगत गरे, त्यसैले उनले यस्तो भन्न सके । आनन्दको यही कारणले गर्दा त अहिले हामीसँग बौद्ध धर्मको इतिहास जीवित छ ।
आनन्दको काठमाडौं यात्रा
बुद्धकै समयमा काठमाडौं उपत्यकामा बौद्ध धर्मको प्रवेश भइसकेको थियो, बौद्ध साहित्यले यस्तै भन्छ । बुद्धको पालामा काठमाडौंमा किरातहरूको राज्य चलिरहेको थियो । दक्षिणतिरका निवासी व्यापारका लागि काठमाडौं आउँथे । सातौं शताब्दीमा लेखिएको मूलसर्वास्तिवादविनय सूत्रमा नेपालबारे उल्लेख छ र त्यसमा व्यापारी काठमाडौं आउने उल्लेख छ । तिनै व्यापारीसँग भिक्षुहरू पनि काठमाडौं उपत्यका आइपुग्थे ।
बुद्ध जीवित छँदै उनको कुलको विनाश भएको थियो । विडुडभले शाक्यहरूको आमहत्या गरेका थिए । त्यसबाट बचेका केही शाक्य भागेर नेपाल पनि आइपुगेका थिए । तीमध्ये केही बुद्ध र आनन्दका नातेदार पनि थिए । तिनै नातेदारलाई भेट्न एकपल्ट व्यापारीसँग आनन्द काठमाडौं आइपुगे । उनलाई काठमाडौंको चिसो मौसमले निकै सताएको थियो । श्रावस्ती फर्केयता आनन्दको हातखुट्टाको औंला तुसारोले खाएको देखेर अरू भिक्षु साह्रै चिन्तित भए र यसको कारण सोधे ।
आनन्दले उनीहरूलाई भनेका थिए, ‘नेपाल हिमालय पर्वतसँगै जोडिएको छ । त्यहाँ निकै चिसो छ । हिउँ र हावाले गर्दा मेरो हात–खुट्टाको यो स्थिति भएको हो ।’ भिक्षुहरूले फेरि प्रश्न गरे, ‘नेपालका भिक्षुले जुत्ता लगाउने गर्छन् कि गर्दैनन् ?’ आनन्दको जवाफ थियो, ‘लगाउँछन् ।’ नेपाल छँदै आनन्दले किन जुत्ता लगाएनन् भने उनलाई बुद्धले यसको अनुमति दिएका थिएनन् । बुद्धले पछि सबै कुरा सुनेर नियम नै बनाए, जाडो र हिमाली ठाउँमा भिक्षुले जुत्ता लगाउन सक्छन् ।
बुद्धको विश्व यात्रा
गौतम बुद्ध आफ्नो जीवन कालमा कहाँकहाँ पुगे ? बौद्ध धर्म कसरी विश्वभर फैलियो ? र, बुद्ध जन्मिएको र ज्ञान प्राप्त गरेको भूमिमै किन उनका अनुयायीहरू निकै न्यून छन् ?
जेष्ठ ४, २०७६ नेत्र आचार्य
बुद्ध पूर्णिमा मनाउन फ्रान्सबाट नेपाल आएकी क्यारोलिन केही दिनअघि भक्तपुरका विहारहरूको कलाकृति नियाल्दै मुग्ध भइरहेकी थिइन्  । उनलाई झनै मोहित तुल्यायो नजिकै घरको झ्यालमा देखिएको नाति–बाजेको दृश्यले  ।
क्यारोलिन उक्त बालक मुस्काएको क्षण क्यामरामा खिच्न चाहन्थिन्, लामै प्रतीक्षापछि क्षणभरका लागि बालक मुस्कुरायो । क्यारोलिन फिदा भइन् र उक्त बालकको नाम सोधिन् । बाजेले भने– यो अर्हन् हो । अर्हन् भनेको बुद्धको नाम भन्ने थाहा पाएपछि त उनको खुसीको सीमा रहेन । उनी तत्क्षण आफ्नो समूहका साथीहरूको हूलमा मिसिइन् र हौसिंदै सबैलाई भनिन्, ‘मैले बुद्ध भेटें ! मसँग बुद्ध मुस्काएको तस्बिर पनि छ !’
बुद्ध महापरिनिर्वाण भएको पच्चीस सय वर्षपछि समेत बुद्धत्वको सुगन्ध विश्वका कुनाकुनासम्म पुग्नु र त्यसले मानिसहरूलाई मन्त्रमुग्ध बनाइरहनु आश्चर्यको विषय बिल्कुलै होइन । हरेक वर्ष लुम्बिनीमा लाखौं मानिस आइरहनु पनि आश्चर्यको विषय होइन । किनभने बुद्धत्व अपूर्व घटना हो र यसको स्वभाव नै सबैलाई मनैदेखि आकर्षित गर्नु हो । बुद्धत्व के हो भन्ने बुझेर पनि यसप्रति फिदा नभई रहन असम्भवजस्तै हुन्छ । जीवनभर भौंतारिंदै खोजिरहेको कुरा आफ्नै मनभित्र छ भन्ने थाहा पाउनु सहज बुद्धि भएका हरेक मानिसका लागि जीवन रूपान्तरणकारी क्षण भइदिन्छ । बुद्ध, बुद्धत्व र यसको विश्वव्यापी विस्तारलाई विभिन्न चरणमा बुझ्न सकिन्छ र हरेक बुझाइको आफ्नै अर्थवत्ता हुन्छ ।
गौतम बुद्धलाई बुद्धत्व प्राप्ति पूर्णिमाको रातमा भएको थियो, यसको प्रतीकात्मक अर्थ छ । पूर्णिमा प्रकाशको पूर्णत्वको अवस्था हो, पूर्णता कल्याणको मार्ग हो । बुद्धले देशना गरेको ‘धर्म’ आदि, मध्य र अन्त्यमा कल्याणकारी मानिन्छ । यो कल्याणकारी धर्मलाई विश्वभर विस्तार गर्न बुद्धले जीवनपर्यन्त प्रयत्न गर्नुभयो । पानी पर्ने तीन महिना कुनै विहारमा ‘वर्षावास’ गर्नेबाहेक सबै ऋतुमा बुद्ध अनवरत यात्रा गरिरहनुभयो । सबैको हित एवं कल्याण गर्ने उद्देश्य बुद्धका हरेक यात्राको अन्तर्य हुन्थ्यो । बुद्धत्व एक अद्भुत घटना थियो र यसको सुगन्ध सबैतिर पुर्‍याउन एक्लो प्रयत्नले सम्भव छैन भन्ने बुद्धलाई थाहा थियो । यसका निम्ति बुद्धले भिक्षुहरूको संघ निर्माण गर्नुभयो । संघमा प्रशिक्षित अर्हत् अवस्था प्राप्त भिक्षुहरूलाई धर्मदूतको रूपमा तयार गर्नुभयो । ती धर्मदूतले थप धर्मदूत तयार गरे र यसप्रकार सिलसिला चलिरह्यो, बुद्धत्व विश्वभर विस्तार भइरह्यो । बुद्ध भन्नु नै बुद्धत्व हो, बुद्धत्व नै वास्तवमा बुद्ध हो । बुद्धले भन्नुभएको छ, ‘धर्मतो बुद्धा द्रष्टव्या धर्मकायो हि नायका’ अर्थात् धर्मलाई देख्नेले बुद्धलाई देख्छ, बुद्धको वास्तविक काय या रूप धर्म हो । बुद्धका उपदेशलाई एउटै शब्द धर्म भनिन्छ । यस अर्थमा जहाँ धर्म पुग्यो त्यहाँ बुद्ध पुग्नुभएको हो । बुद्धत्वको अर्थ, स्वतःस्फूर्त विस्तार हुँदै जाने यसको विशेषता, विभिन्न भूमिमा पुग्दा फेरिएका बुद्धका रूपहरू र वर्तमान समयमा बुद्ध भूमिमै बुद्धलाई पछ्याउनेहरू पातलिंदै जानुका कारण खोतल्नु यो लेखको आशय हो ।
बुद्ध यात्राको आरम्भ
पालि ग्रन्थ निदानकथाअनुसार सिद्धार्थ गौतमले पूर्वजन्ममा दीपंकर नामका बुद्धलाई भेटेको प्रसंग आउँछ । सुमेध तापस दीपंकर बुद्धका गुणहरू देखेर कतिसम्म प्रभावित भएका थिए भने बुद्धका पाउमा माटो नलागोस् भन्ने ध्येयले हिलो बाटोमा सुतेर बसिरहे । सुमेधलाई थाहा थियो, उनी हृदयदेखि नै यसो गर्दै छन् । हिलोमा सुतिरहँदा उनको मनमा अरू सुन्दर भाव पैदा भए । मेरो मन यति शुद्ध र गुणग्राही छ भने मैले मनको अन्तरकुन्तरमा रहेका सबै मानवीय वासनाहरू निर्मूल गर्नुपर्छ । मैले ज्ञान प्राप्त गर्नेछु र दुःखबाट सदाका लागि मुक्त हुनेछ । तर, म एक्लै मुक्त भएर के अर्थ, मैले त समस्त मानिस र देवताहरूलाई दुःखमुक्त गर्नेछु । ‘अहमपि लोके बुद्धो भविष्यामि’ अर्थात् म पनि दीपंकरजस्तै बुद्ध बनेर लोकहितमा समर्पित हुनेछु । महावस्तु नामको ग्रन्थमा यो प्रसंगमा पाठान्तर पाइन्छ तर बुद्ध बन्ने ध्येय एउटै छ ।
‘बुद्धो भवेयं जगतो हिताय’
जगत्को हितका लागि बुद्ध होऊँ भन्ने संकल्प पैदा हुनु बुद्धत्वको यात्रामा पहिलो कदम हो । बुद्धत्वको यात्रा आरम्भ भएसँगै बुद्धको विश्व यात्रा तय हुन्छ । किनभने बुद्धत्व विस्तार भइरहने गुणले युक्त हुन्छ । त्यो गुण हो महाकरुणा । संसारमा दुःखी प्राणीहरूको कमी छैन र बुद्धको अहैतुकी करुणा समस्त प्राणीलाई दुःखमुक्त बनाउने ध्येयले ओतप्रोत हुन्छ । आफ्ना दुःख अन्त्य भएपछि दुःखीहरूप्रति मनमा स्वतःस्फूर्त करुण पैदा हुनु अहैतुकी करुणा हो, महाकरुणा हो ।
बुद्धले आफ्ना भिक्षुहरूलाई दीक्षित गर्दा बारम्बार सुझाउने मुख्य कुरा लोक अर्थात् मानव जातिप्रति मनमा अपार करुणा विकसित गर्नु भन्ने हुन्थ्यो । बुद्ध भन्नुहुन्थ्यो, ‘चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुस्सानं । देसेथ भिक्खवे धम्मं आदिकल्याणं मंझे कल्याणं परियोसान कल्याणं सात्थं सव्यंजनं केवल परिपुन्नं ब्रह्मचरियं पकासेथ ।’ अर्थात्, भिक्षुहरू हो, बहुजन हित, बहुजन सुख र समाजको कल्याणका लागि, देवता र मानिसको हित र सुखका लागि सबैतिर विचरण गर, विहार गर । सबै धर्मदूतलाई बुद्धको यस्तै निर्देशन हुन्थ्यो । बुद्धको निर्देशन हुन्थ्यो, भिक्षु हो सबै ठाउँमा पुग र धर्मदेशना गर, धर्मको अर्थ सम्झाऊ, मानिसहरूलाई झवचक्रm अर्थात् दुःखको चत्रबाट मुक्त गर, सबैतिर धर्मचत्र चलाऊ ।
गौतम बुद्ध कहाँकहाँ पुग्नुभयो ?
कामसुखमा रमाउने या कठोर तपस्या गर्दै शरीर सुकाउने दुवै तरिका ठीक होइनन् भन्ने जानेर बुद्धले मध्यम मार्ग अपनाउनुभयो, तदनन्तर उहाँलाई विपश्यना ध्यानमा सफलता मिल्यो । बुद्धले चार आर्य सत्य देख्नुभयो, आर्य अष्टांगिक मार्ग पहिल्याउनुभयो र प्रतीत्यसमुत्पाद अर्थात् जीवन र जगत् कुन नियमले चलिरहेको छ भन्ने बोध गर्नुभयो । यसप्रकार ज्ञानोदय भइसकेपछि बुद्ध दुःखमुक्त हुनुभयो, संसारको जन्ममृत्युको चक्रबाट सदाका लागि माथि उठ्नुभयो । बुद्धत्व प्राप्तिपछि सबभन्दा पहिला तपस्या गर्दाका साथीहरूलाई आफूले पाएको ज्ञान सुनाउने इच्छा उहाँलाई भयो । ती पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूलाई प्रथम उपदेश सुनाउन बुद्ध वाराणसीको सारनाथ पुग्नुभयो । बुद्धको पहिलो उपदेशलाई धर्मचक्रप्रवर्तन सूत्र भनिन्छ । झवचक्र अर्थात् दुःखको माखेसाङ्लोबाट मुत्त हुन धर्मचक्र चलाउन आवश्यक हुन्छ । धर्मलाई देख्ने हो भने र तदनुरूप अभ्यास गर्ने हो भने हरेक व्यक्तिले आफ्नो कल्याण स्वयंले गर्न सक्छ, कुनै पनि वाद, पन्थ, सम्प्रदाय र संगठित धर्मको पिछलग्गु हुन पर्दैन, आफ्नै प्रयत्नले बुद्ध बन्ने क्षमता हरेक मानिसमा पहिल्यैदेखि निहित छ, अतः आफ्नो कल्याण आफैं गर भन्ने बुद्धको पहिलो देशनाको आशय थियो ।
बुद्धका प्रथम पाँच शिष्यहरू छिट्टै अर्हत् भए र उनीहरूले अन्य दर्जनौं भिक्षुहरूलाई धर्मको उपदेश गरे । यही क्रमले साठी जना अर्हत् भिक्षुहरू पुगेपछि बुद्धले सबैलाई एक ठाउँमा भेला गरी भन्नुभयो— भिक्षुहरू हो, हरेक भिक्षु आफ्ना मानसिक बन्धनबाट मुक्त हुनुपर्छ तर भिक्षुमा मानिसहरूप्रति करुणा जाग्नुपर्छ, समाजप्रति कर्तव्यबोध पनि हुनुपर्छ । अतः अर्हत् अवस्था प्राप्त गरिसकेका भिक्षुहरू विभिन्न स्थानमा विचरण गर र बुद्धत्वको उपदेश सुनाएर मानिसहरूलाई धर्मको बाटो सुझाऊ, सबैको कल्याण गर ।
बुद्धले भिक्षु संघलाई एक आदर्श समाजका रुपमा विकसित गर्नुभएको थियो । समाजमा भिक्षु संघप्रति उस्तै आदरभाव थियो । कुनै रंगभेद, जातिभेद, वर्गभेद नगरी सबैलाई समान रूपले कदर गर्ने र धर्मानुश्रवणमा सहभागी गराउने हुँदा मानिसहरू बुद्धको विशाल हृदय र व्यवहारबाट प्रभावित थिए । जनभाषामा धर्म प्रचार गर्दा अधिकतम मानिसले ज्ञानका कुरा बुझ्छन् भनेर बुद्धले तत्कालीन समयमा प्रचलित जनभाषामा शिक्षा दिने प्रचलन बसाउनुभयो । यसले गर्दा पनि बुद्धको शिक्षा समाजको तल्लो तहसम्म पुग्यो । बुद्धले भिक्षुहरूलाई सम्प्रदायबाट मुक्त भएर आफ्नो र अरूको कल्याणको खातिर धर्मको शिक्षा विस्तार गर्न निर्देशन दिनुभयो । यसरी मानिसहरूलाई दुःखमुक्ति र बुद्धत्वको बाटो देखाउनका लागि चारिका अर्थात् देशाटन गर्ने भिक्षुहरूलाई बुद्धले दुई जना छन् भने दुवैलाई फरक बाटोबाट अगाडि बढ्न सुझाउनुभयो । यसो गर्दा धेरैभन्दा धेरै मानिसले धर्मको देशना सुन्ने अवसर प्राप्त गरून् भन्ने बुद्धको आशय थियो । सबै दिशातिर धर्मदूत पठाइसकेपछि बुद्ध स्वयं पनि धर्म विस्तारको लागि उरुवेलतिर प्रस्थान गनुभयो । बुद्धको व्यक्तित्व, संघको उदात्त सोच र आदि, मध्य एवं अन्त्यसम्म कल्याणकारी धर्मको उपदेश सुनेर दिनानुदिन सयौं हजारौं मानिस प्रभावित भए, दीक्षित भए र दुःखमुक्त भए । उनीहरूले अन्य मानिसहरूलाई दीक्षित गरे । यो क्रम बढ्दै गएर बुद्धले धर्मको देशना दिन खटाउनुभएको छ महिनाभित्र बुद्ध कपिलवस्तु जानुहुँदा भिक्षु संघमा बीस हजार भिक्षु आबद्ध भइसकेका थिए ।
आफ्नो जीवनकालमा बुद्ध भारतका विभिन्न सहरहरू र नेपालको कपिलवस्तुमा बारम्बार भ्रमण गनुभयो । बुद्धले केही विशेष स्थानहरूलाई धर्म विस्तारको केन्द्र नै बनाउनुभएको थियो । यस्तै केन्द्र थिए श्रावस्ती र राजगृह । बाबा भीमराव अम्बेडकरले पालि ग्रन्थहरूमा खोजबिन गर्दा बुद्ध श्रावस्तीमा करिब ७५ पटक र राजगृहमा २४ पटक भ्रमण गर्नुभएको तथ्य पत्ता लगाएका थिए । कपिलवस्तु र वैशालीमा बुद्ध छ पटक भ्रमण गर्नुभएको र कम्मासधम्ममा चार पटक पुग्नुभएको स्रोत फेला पर्छ । बुद्ध सशरीर पुग्नुभएका अन्य स्थानहरू अस्सपुर, नालन्दा, घोषिताराम, कुसीनारा, देवदह, पावा, मगधको राजधानी पाटलीपुत्र, दर्जनौं शाक्य जनपद र कुरु जनपदहरू हुन् । यी सबै स्थानमा बुद्ध पैदलै हिँडेर पुग्नुभयो । बयलगाडी उपयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर बुद्धले हिँडेरै चारिका गर्न मन पराउनुभयो । बाटोमा भेटिने सबैलाई धर्मको देशना सुनाउने उहाँको ध्येय हुन्थ्यो ।
बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि धर्मलाई विश्वव्यापी बनाउने कार्य निर्बाध जारी रह्यो । सबै व्यवस्था बुद्धले बसालिदिनुभएको थियो, हरेक युगमा नयाँ भिक्षुहरू संघमा प्रवेश गरे र स्थापित नियमअनुसार धर्म प्रचारलाई अगाडि बढाए । यस क्रममा धर्मलाई विश्वभर विस्तार गर्न सम्राट् अशोक जत्तिकै प्रभावी अरू फेला पार्न मुस्किल हुन्छ । सम्राट् अशोक निग्रोध नामक व्यक्तिको प्रभावले बुद्ध धर्मप्रति आकर्षित भएका थिए । पछि उपगुप्त भिक्षुबाट उनी बुद्ध धर्ममा दीक्षित भए । उनी लुम्बिनीलगायत दर्जनौं बुद्धक्षेत्रहरूमा धर्म प्रचार गर्न र धर्मको इतिहास जोगाइराख्नका लागि स्वयं पुगे । अशोक स्तम्भहरूकै कारण आज बुद्धको जन्मभूमि नेपाल हो भन्ने अकाट्य रूपले सावित भएको छ । अशोक स्वयं सम्राट् भएको हुँदा उनमा अधिकार, क्षमता र कौशल थियो, स्वयं बुद्ध धर्मानुलम्बी भएको हुँदा धर्मप्रति श्रद्धा पनि थियो । उनले मज्झन्तिकलाई कश्मीर तथा गान्धारमा, महारक्षितलाई यवन देशमा, मज्झिमलाई हिमालय देशमा, धर्मरक्षितलाई अपरांतक देशमा, महाधर्मरक्षितलाई महाराष्ट्रमा, महादेवलाई मैसुरमा, रक्षितलाई कन्नडमा, सोन र उत्तरलाई सुवर्णभूमिमा धर्मप्रचारका लागि पठाए । उनले श्रीलंकामा आफ्ना छोराछोरी महिन्दा र संघमित्रालाई धर्म प्रचारका लागि पठाएका थिए । सम्राट् अशोकले बर्मामा धर्म प्रचारका लागि विशेष टोली पठाएका थिए । बुद्धप्रेमी अशोकका केही वचनहरू आज पनि कालजयी छन्—बाँच र बाँच्न देऊ, सर्वहितभन्दा ठूलो कार्य अरु केही छैन, राजनीतिक लाभका लागि हिंसा गर्नु सबैभन्दा निन्दनीय हो ।
थरीथरीका बुद्ध, थरीथरीका अभ्यास
बुद्ध धर्म चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, भियतनाम, बर्मा, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, भुटानलगायत मुलुकमा पुग्दा बुद्धको प्रतिमा उस्तै रहेन । तत्तत् मुलुकका शिष्यहरूले तिनको कल्पनाअनुसार अनुकूल प्रतिमा बनाए । तिब्बतमा त बहु बुद्ध प्रणाली विकसित भयो— अमिताभ बुद्ध, महामञ्जुश्री बुद्ध, अवलोकितेश्वर आदि । हजार हात भएका अवलोकितेश्वरको समेत परिकल्पना गरियो । मानिसहरूको हित र कल्याणका लागि स्वयंको निर्वाणसमेत बोधिसत्त्वहरू त असंख्य कल्पना गरिए ।
बुद्धका पछिका शिष्यहरूमध्ये बोधिधर्मले चीनमा पुगेर चान बुद्ध दर्शन विस्तार गरे । उनले चीनका मानिसहरूलाई ध्यान सिकाए । चिनियाँ भाषीहरूले ध्यानलाई चान भन्न थाले । यही चान जापान पुग्दा झेन बन्यो । जापानमा झेन सम्प्रदाय प्रभावी छ । डिटी सुजुकीले झेनलाई पश्चिमा देशहरूमा विस्तार गरे ।
वज्रयान सम्प्रदायका आचार्य पद्मसम्भव भारतबाट तिब्बत पुगे र त्यहाँका मानिसहरूलाई वज्रयानमा दीक्षित गरे । उनको प्रभाव व्यापक भयो, उनी अन्ततः गुरु रिन्पोछे भनेर चिनिन थाले । तिब्बती भेकमा विकसित भएको वज्रयानलाई दलाई लामा र अरू रिन्पोछेहरूले वर्तमान समयमा विश्वभर विस्तार गरिरहेका छन् ।
तन्त्रयानका रूपमा विकसित भएको वज्रयानले बुद्धका मूल शिक्षालाई कतै छोडेको छैन, बरु युगानुकूल विकास र परिष्कार गर्दै लगेको पाइन्छ । कोरियामा सद्धर्मपुण्डरिकसूत्रलाई मुख्य ग्रन्थ मानेर लाखौं मानिस बुद्धका शिक्षा सुन्छन् र ध्यानको अभ्यास पनि गर्छन् । जापानमा निचिरेनलगायतका बौद्ध सम्प्रदायमा पनि यही ग्रन्थ आधारभूत हो । बुद्धको मुख्य शिक्षा पनि ध्यान नै हो ।
बुद्ध दर्शन गतिशील प्रकृतिको छ । खासगरी वज्रयानमा बुद्ध दर्शनको ‘डाइनामिक’ स्वभाव प्रस्ट देख्न पाइन्छ । जस्तो चीनमा विकसित भएको चिया संस्कृतिमा बुद्ध दर्शनको गहिरो प्रभाव देखिन्छ । चिया पिउनु ध्यानको अभ्यास गर्नु जत्तिकै स्मृति र सम्प्रजन्ययुक्त हुन्छ । चीनमा प्रचलित कुङ फु, जापानमा विकसित हाइकु कविता र कोरियामा विकसित कलिग्राफीको अन्तर्यमा बुद्ध दर्शनको प्रभाव स्पष्ट देख्न पाइन्छ । यी संस्कृतिले हरेक क्रियाकलाप हरेक क्षणमा कसरी माइन्डफुल अर्थात् होसपूर्ण भएर सम्पन्न गर्ने भन्ने सुझाउँछन् । बुद्धले सिकाएको ध्यानको मूल आशय पनि यही हो । वर्तमान समयमा होसपूर्ण भएर र पक्षविपक्षमा नढल्की तटस्थ भएर कार्य गर्नु बुद्धत्वतर्फको यात्रा नै हो । होसपूर्ण हुने अझ्यास सघन हुँदै जाँदा मानिस मन र समयको अदृश्य बन्धनबाट मुक्त हुन सक्छ । मुत्तिको सुख सबै सुखभन्दा अप्रतीम हुन्छ । यो यस्तो सुख हो जुन जहिल्यै विस्तार हुँदै जान्छ, कहिल्यै ह्रास भएर जाँदैन ।
उता पश्चिमा जगत्मा जोन कबात जिनले बुद्धले सिकाएको ध्यान पद्धतिको सिको गर्दै माइन्डफुलनेसमा आधारित तनाव न्यूनीकरण थेरापी विकसित गरे । वर्तमान समयमा भिक्षु मेथ्यु रिकार्डले करुणा फाउन्डेसन मार्फत् बुद्धका शिक्षालाई विश्वभर विस्तार गरिरहेका छन् । टिच न्यात हन्हले भियतनामबाट इन्गेज्ड बुद्धिजमलाई विश्वभर फैलाइरहेका छन् जुन अचेल प्राज्ञिक अध्ययनको एक मुख्य विधा बनेको छ ।
बुद्धको जीवनी, ज्ञान प्राप्ति र धर्म देशना वर्णन गर्दै एडविन आर्नोल्डले लेखेको ‘लाइट अफ एसिया’ ले संसारभरी बुद्ध धर्म र दर्शनप्रति मनिसहरूमा जागरण ल्याइदियो । आर्नोल्डले उक्त कृति ललितविस्तरसूत्र नामको ग्रन्थको आधारमा तयार गरेका थिए । पश्चिमा जगत्मा पहिलो पटक बुद्ध दर्शनको परिचय दिन पुस्तकका रूपमा यो कृति विख्यात छ । श्रीलंका पुगेका भिक्षु बुद्धघोषले विशुद्धिमग्ग र विमुक्तिमग्ग नामका दुई बेजोड कृति लेखे । यी कृतिका बारेमा भन्ने गरिन्छ, बुद्धका सबै शिक्षा लोप भए र यी दुई ग्रन्थ बाँकी रहे भने पनि बुद्ध धर्मलाई केही घाटा हुने छैन ।
बुद्धका शिष्यहरूले विश्वभर बुद्धत्वको सुगन्ध फैलाए र यो क्रम अझै जारी छ । तर बुद्ध स्वयंले देशना दिनुभएको नेपाल र उत्तर भारतमा बुद्धका अनुयायीहरू कमी हुँदै जानु भने आश्चर्यजनक छ । बत्तीमुनि अँध्यारो भन्ने आहान यहीं चरितार्थ भइरहेको छ । यसो हुनुको पछि धेरै कारण हुन सक्छन् । जस्तो, बुद्धले पूजाआजा र तीर्थव्रतलाई श्रद्धा जगाउने कार्यका लागि मात्र उपयोग गर्न सुझाउनुभएको थियो तर बुद्धका मूर्ति पूजा गर्नु नै धर्मको मुख्य अभ्यास हुन थाल्नु, भिक्षुहरू धर्म उपार्जनमा भन्दा अर्थोपार्जनमा केन्द्रित हुनु र ध्यानको अभ्यास नगरी गुरु बन्ने होडबाजी चल्नु केही कारण हुन् ।
अर्को कारण हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित छ । नेपाल र भारतमा हिन्दु धर्म सधैं बलियो रह्यो, हिन्दुहरूले बौद्ध धर्म र दर्शनलाई फस्टाउने मौका दिएनन् । उनीहरूले बुद्धलाई विष्णुका एक अवतार हुन्समेत भने । जुन कुरा शास्त्रीय दृष्टिले कतैबाट तर्कसंगत देखिंदैन । हिन्दु ईश्वरवादी धर्म हो, तर बुद्धले कुनै पनि सृष्टिकर्ता वा सर्वेसर्वा ईश्वर स्वीकार गर्नुभएन । बुद्धले जातिभेद अन्त्य गरेको, बलिप्रथा रोकेको र उदार विश्व दृष्टिकोण अपनाएकाले हिन्दुवादी ब्राह्मणहरूको स्वार्थमा बाधा पुर्‍याउने देखियो । अतः समाजमा शक्तिशाली रहेका
ब्राह्मणहरूले राज्यस्तरबाटै बुद्धको धर्म र दर्शनलाई खेद्ने काम गरे । राणा शासनकालमा नेपालमा बुद्ध मूर्ति बनाएको आरोपमा भिक्षु अमृतानन्दलाई आठ वर्ष जेलमा थुनियो । विसं २००० मा भिक्षु अमृतानन्दलगायत आठ जना भिक्षुहरूलाई देश निकाला गरियो । बौद्ध दर्शनका पुस्तक खोजीखोजी जफत गरियो, हिन्दुहरू धर्म परिवर्तन गरी बौद्ध बन्न नपाइने, बौद्ध विहार बनाउन नपाइने नियम नै बनाइयो । यसरी राज्यले नै खेदेपछि बुद्धको धर्म बुद्ध भूमिमै मेटिंदै गयो ।
उत्तर भारत हिन्दु धर्मको उद्गमस्थल हो, भारतीय हिन्दुहरूले बुद्ध दर्शन व्यवस्थित, उदार र प्रभावी देखेपछि आफ्नो अस्तित्वमा खतरा ठाने । उनीहरूले अनेक शास्त्र र काव्य लेखेर बुद्ध धर्मलाई माथि उठ्न दिएनन् । ‘हस्तिना ताड्यमानेऽपि न गच्छेत् जैन मन्दिरम्’ अर्थात् प्राण घाँटीबाट जानै लागे पनि, हात्तीले कुल्चेर मार्नै लागे पनि जैन धर्म या बुद्ध धर्मको शरणमा नजानू भन्नेजस्ता दुष्प्रचार गरे । यस्तै बेला धर्मान्ध र मूर्ख मुसलमान शासक बख्तियार खिलजीलगायतले भारतमा आक्रमण गरे र खासगरी बौद्ध साहित्यको केन्द्रका रूपमा विकसित ओदान्तपुरी विश्वविद्यालय र नालन्दा विश्वविद्यालयमा आगो लगाइदिए । भनिन्छ, नालन्दाको पुस्तकालयमा लागेको आगो छ महिनासम्म निभेको थिएन ।
मुसलमान अतिवादीहरूले बौद्धहरूलाई निर्मूल पार्न हरेक विहार, चैत्य, स्तूपा भत्काइदिए, लाखौं लाख पुस्तकहरू खोजीखोजी जलाइदिए र हजारौं भिक्षु एवं बौद्ध आचार्यहरूलाई मारे । त्यसबेला बौद्धहरू लुक्दै, भाग्दै नेपाल र तिब्बतमा शरण लिन आएका थिए । यसप्रकार अतिचार हुँदासमेत बुद्ध धर्म र दर्शन जीवित रहन सक्नु उल्लेख्य छ । जे–जति बौद्ध दर्शन, साहित्य र परम्परा जीवित छ त्यसलाई यथोचित संरक्षण र विस्तार गर्न सक्यौं भने पनि शान्त, सुखी र समतापूर्ण हुन सकिन्छ । भौतिक समृद्धि देखिसकेका देशहरूले आन्तरिक समृद्धिका लागि बुद्धको धर्मलाई चाखपूर्वक पछ्याउँदै गरेको देखियो । अन्ततः मानिसलाई चाहिने आन्तरिक सुख–शान्ति नै रहेछ, हामीले बेलैमा बुद्धलाई चिन्न सके जाती हुन्थ्यो । बत्तीमुनि अँध्यारो हुनुमा केही दृश्यमान र केही अदृश्य कारण समेत होलान् । बुद्धको ज्ञानको आलोक कति गरिमापूर्ण छ भन्ने हामीलाई बोध भइसकेको हो भने त्यो आलोकलाई पुनः जगाउने सम्भावना छन् । हामी सबै मिलेर सम्भावनाहरू खोजी गर्न सकिन्छ । सुरुआत गर्नलाई राज्याधिकारीहरू नै सचेत हुनुपर्छ । कम्तीमा बुद्ध जयन्तीका दिनमा मञ्चमा उभिएर राजनीतिक भाषण दिनुको साटो कुनै वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुलाई बुद्धको शिक्षाका बारेमा बोल्न समय दिने र प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरू दर्शकदीर्घामा बसेर धर्म श्रवण गर्न सके जनजनमा बुद्धत्वको गरिमा स्वतः स्थापित हुनेथियो । सम्मानित भिक्षुसँगै एकाध घण्टा सबै ध्यानमा बस्ने हो भने त त्यसले मनमा जगाएको आलोकले बत्तीमुनिको अँध्यारो स्वतः विलीन हुने थियो । मंगल होस् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७६ ११:०४